Ilaalinta Rhino Madow ee ka jirta Tansaaniya waxay qaadaysaa tillaabo cusub, oo caawineysa dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Ilaalinta Rhino Madow ee ka jirta Tansaaniya waxay qaadaysaa tillaabo cusub, oo caawineysa dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Ilaalinta Wiyisha Madow ee khatarta ku jirta macnaheedu waa ilaalinta dalxiiska
Aagga Ilaalinta Ngorongoro ee Tansaaniya ayaa toddobaadkan bilaabay hab cusub oo ilaalin ah si loo badbaadiyo wiyisha madow ee ugu halista badan gudaha deegaankeeda ilaalinta iyo inta kale ee gobolka Bariga Afrika. Si wadajir ah Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska oo taageero farsamo ka heleysa Frankfurt Zoological Society (FZS), Maamulka Aagga Ilaalinta Ngorongoro (NCAA) ayaa hadda dadkeeda wiyisha ku ilaalinaysa calaamado gaar ah iyo aalado elektaroonig ah oo loogu talagalay la socodka raadiyaha si loo sahlo raadraaca.
Toban wiyil ayaa lagu calaamadeyn doonaa aagga dhawrista bishaan.
Tirada wiyisha ee ku nool gudaha boholaha Ngorongoro ayaa gaartay 71, oo ay ku jiraan 22 rag ah iyo 49 dheddig ah.
Dhammaan wiyisha ku nool Tansaaniya waxaa lagu calaamadayn doonaa tirooyin aqoonsi oo ay ka horeyso xarafka “U” si loogu kala saaro kuwa dariska la ah Kenya, iyadoo lagu calaamadayn doono calaamadda aqoonsiga “V” ee ka horraysa lambarka xayawaanka shaqsiga ah.
Lambarada rasmiga ah ee loo qoondeeyay wiyisha Ngorongoro ee Tansaaniya ayaa ka bilaabma 161 illaa 260, sida ay sheegeen saraakiisha ilaalinta.
Calaamadaha aqoonsiga ee wiyisha 'dhegta bidix iyo midig ayaa la dhigi doonaa, halka 4 ka mid ah naasleyda labka ah lagu hagaajin doono aalado lagula socdo raadiyaha si loola socdo dhaqdhaqaaqyadooda inta lagu guda jiro xadka ilaalinta.
Ilaalinta wiyishaan madow ee Afrikaanka ah ee Ngorongoro ayaa socota waqtigan oo khubarada ilaalinta ay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira waxqabad bani'aadam oo sii kordhaya aaggan dhaxalka ah sababtuna waxay tahay in dadka oo bini'aadamku ay la qaybsadaan hab -nololeedkooda duurjoogta.
Badbaadi Wiyisha Caalamiga ah, hay'ad samafal oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday (UK) oo ku xeel dheer ilaalinta wiyisha, ayaa warbixinteedii ugu dambeysay ku sheegtay in 29,000 oo wiyil ah ay ka hareen adduunka. Tiradooda ayaa aad hoos ugu dhacday 20 -kii sano ee la soo dhaafay.
Baarayaasha Sigfox Foundation ayaa ku habboon wiyisha gobollada koonfureed ee Afrika iyagoo wata qalab gaar ah oo leh dareemayaal si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyadooda si ay uga badbaadiyaan ugaadhsatada, inta badan waxay ka yimaadeen Koonfur -bari Aasiya halkaas oo laga rabo geeska wiyisha.
Raadinta xayawaanka, cilmi -baarayaashu waxay ka ilaalin karaan ugaadhsatada waxayna si fiican u fahmi karaan caadooyinkooda si ay u ilaaliyaan, ka dibna u beddelaan si ay u dhalaan, gudaha meelaha la ilaaliyo oo aakhirkana ilaaliyaan noocyada.
Mu'asasada Sigfox waxay hadda iskaashi la leedahay 3 ka mid ah ururada ugu weyn ee ilaalinta duurjoogta caalamiga ah si ay u ballaariso nidaamka dabagalka wiyisha oo leh dareemayaal.
Wejiga koowaad ee tijaabada dabagalka wiyisha, oo loogu magac daray “Hadda Wiyil Hadalka,” ayaa ka dhacay July 2016 ilaa Febraayo 2017 meelaha lagu ilaalinayo 450 wiyisha duurjoogta ah ee Koonfurta Afrika.
Koonfur Afrika waxay hoy u tahay boqolkiiba 80 wiyisha haray ee adduunka. Iyada oo dadka ay ugaarsadeen ugaadhsatada, waxaa jira khatar dhab ah in la waayo noocyada wiyisha sannadaha soo socda haddii aysan dawladaha Afrika qaadin tallaabooyin dhab ah oo lagu badbaadinayo naasleyda waaweyn, ayay khubarada Save the Wiyisha sheegeen.
Wiyisha madow waxay ka mid tahay xayawaanka ugu ugaadhsiga badan uguna halista badan qaaradda Afrika iyadoo dadkeedu hoos u dhacay heer aad looga naxo.
Ilaalinta wiyisha ayaa hadda ah bartilmaameed muhiim ah oo ay ilaaliyayaashu raadinaayaan inay hubiyaan badbaadadooda Afrika kadib ugaarsiga halista ah kaas oo hoos u dhigay tiradooda tobankii sano ee la soo dhaafay.
Beerta Qaranka ee Mkomazi ee Tansaaniya hadda waa beertii ugu horraysay ee duurjoogta Bariga Afrika oo takhasus gaar ah leh dalxiiska wiyisha.
Isagoo eegaya buurta Kilimanjaro oo dhanka woqooyi ah, iyo Tsavo West National Park ee Kenya oo ku taal bariga, Mkomazi National Park waxay ku faantaa duurjoog badan oo ay ku jiraan in ka badan 20 nooc oo naasley ah iyo ilaa 450 nooc oo shimbiro ah.
Iyada oo loo marayo Daryeelka Ilaalinta Duurjoogta George Adamson, wiyisha madow ayaa dib loogu soo celiyay aag aad loo ilaaliyo oo deyr leh oo ku dhex yaal Beerta Qaranka ee Mkomazi oo hadda ilaalinaysa oo taranaysa wiyisha madow.
Wiyisha madow ee Afrikaanka ah ayaa loo wareejiyay Mkomazi oo laga keenay jardiinooyin kale oo ku yaal Afrika iyo Yurub. Wiyisha madaw ee Afrika ayaa sannadihii la soo dhaafay ahayd noocyada xayawaanka ugu ugaadhsiga badan oo wajahaya khataro waaweyn oo ku wajahan dabargoyntooda sababo la xiriira dalab aad u sarreeya oo ka jira Bariga Fog.
Iyada oo ku fadhida dhul dhan 3,245 kiiloomitir, Mkomazi National Park waa mid ka mid ah jardiinooyinka xayawaanka duurjoogta ah ee dhowaan la aasaasay Tansaaniya halkaasoo eyda duurjoogta ah lagu ilaaliyo iyada iyo wiyisha madow. Dalxiisayaasha booqanaya baarkani waxay arki karaan eeyaha duurjoogta ah oo lagu tiriyo noocyada dabar go’aya ee Afrika.
Tobanaankii sano ee la soo dhaafay, wiyisha madow waxay si xur ah u dhex mushaaxayeen deegaanka deegaanka Mkomazi iyo Tsavo, waxayna ka bilaabmayaan Beerta Qaranka ee Tsavo West ee ku taal Kenya illaa iyo dhaadhaca hoose ee Mount Kilimanjaro.
Wiyisha madow ee Afrikaanku waa nooc hooyo ah oo ku nool gobollada kala duwan ee Bariga iyo Koonfurta Afrika. Waxaa lagu sifeeyay inay yihiin noole halis ku jira oo ugu yaraan 3 nooc-hoosaad ay ku dhawaaqday inay baaba'day Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Dabeecadda (IUCN).